into ntathu Iningi ekhishini Yiqiniso, nesiqandisi. Naphezu kweqiniso lokuthi onobuhle zamanje ngokuvamile ukubukeka ngempela enhle, lisebenze okukhulu namanje ngokuvamile yona le design egumbini, ngaphandle futhi isikhala kakhulu. Ngakho-ke, eminyakeni yamuva, naphezu kwezindleko nomsebenzi kunalokho enkulu, sekuthandwa kakhulu ongakhetha esishunyekiwe Imishini enjalo.
Izinzuzo amafriji esakhelwe, ngaphandle ukonga isikhala ekhishini, zihlanganisa:
Enkulu kuneyangesikhathi ezivamile onobuhle kahle. zifudumele amafriji okunjalo kuvame ukwenziwa ngcono kakhulu.
Izinga engezansi umsindo.
obunamandla nge usayizi elincane.
Umnikazi emakhishini ezinkulu kufanele ukwakha esiqandisini yalolu hlobo. "Solid" imodeli ukusebenzisa njengoba ukhululekile kakhulu. Ikhipha ayefana bendabuko, khulula-ukuma. Lokho egumbini esiqandisini futhi efrijini ukuthi akuphi eyodwa ngaphezu kwamanye. On ikhishi elikhulu kakhulu suite ngokuvamile ifakwe kusukela ezimbili imbala. Umphumela yisinqumo esikhulu ngezicabha ezimbili.
Njengenjwayelo, okushukumiwe ezimbili ekamelweni amafriji mpo kungenziwa ifakwe ngezindlela ezahlukene. Ngo ayatholakala emakhemisi njengoba ukuhlukahluka nje yaleli su, futhi kuyabiza kakhulu, nge izici eziningi.
Omunye izinhlobonhlobo amayunithi "wonke" kukhona onobuhle kulencane. Shumeka esiqandisini usayizi encane kungaba kuhlanganise ngaphansi tabletop. Ngakho, lolu hlobo kuhle futhi kufanelekile ikhishi elincane. Ezokuphepha ukusetshenziswa imishini kuhlinzekwe yinkampani ukupholisa Izinsimbi ekhethekile.
isiqandisi okunjalo kuyinto ekahle ikhishi elincane noma egumbini linye ukuklanywa. Kulokhu, efrijini kungenziwa engaphezulu esemqoka kanye kwesokudla noma kwesobunxele. Ngaphezu kwalokho, ngaphezu onobuhle ezinjalo zivame ukubangela ukuqhuma akhiqizwa tinhlobo letehlukene zangaphansi, emashalofini futhi iwayini amabhokisi.
Izici eziyinhloko isakhiwo
Umklamo amafriji esakhelwe wonke amamodeli kuthanda nokunjengoshizi. Futhi lokhu izinto uqondakala kahle. Phela, noma kunjalo, iyunithi izindlu ngemuva kokufakwa kuzofihlwa ngu zokuhlobisa panel earphone we. Abenzi eyinhloko inketho okunjalo kunikezwa zasendlini ukuthuthukisa ukusebenza yayo. view yangaphandle ye amafriji esakhelwe kungenziwa ngokuthi umuntu-owenziwe kunokuba yasekhaya. Metal umzimba linamathele onobuhle ulahlekile. Kunalokho, inikeza kokuhlanganisayo ekhethekile, okuyinto ngemuva kokufakwa hung panel zokuhlobisa.
Esinye isici amafriji esakhelwe kuyinto engavamile umnyango design. Uhlelo ekhishini efulethini yesimanje zingase zishintshe kakhulu. Futhi kungani akashongo kusengaphambili ukuthi ngayiphi indlela isimo sikuvumela ukuvula esiqandisini. Umnyango onobuhle mobile esishunyekiwe. Okungukuthi, iyunithi angavulwa e noma isiqondiso. Lokhu kukuvumela ukwakha esiqandisini at a wayefisa indawo ekhishini.
Isikimu jikelele ukubekwa kanye yasibamba eyakhelwe e amafriji wayengekho. Ngemodeli ngayinye ethize, umenzi enikeziwe imiyalelo, lapho yonke imininingwane bese ungena inqubo yokufaka. Isendaweni engalungile kungenzeka enze ubunjiniyela ngisho ukuhluleka kwawo okusheshayo. Ngakho-ke, ukufakwa amafriji esakhelwe ngokuvamile uthemba art. it is hhayi Kunconywa ukukwenza bebodwa.
Imithetho jikelele for ukufakwa amafriji esakhelwe yilezi:
IKhabhinethi, okuzoba imodeli etholakalayo kufanele kube evulekile. Uma kungenjalo enikeziwe emhlabeni khona esiqandisini ezanele space free in operation izoqala ukuze overheat.
Ngesikhathi ezingemuva ebiyelwe kumele kunikezwe ukuvuleka komoya.
IKhabhinethi anganikwa nokufakwa esikhethekile kanyekanye bevula iminyango yayo kanye esiqandisini iminyango. Lokhu kuzokwenza ukufaka esiqandisini ngaphandle kwenkinga.
Abanye onobuhle sakha umnyango enhle kakhulu design zanamuhla. amafriji ezinjalo ukufakwa amakhabethe ongaphandle.
I plinth ekhishini amayunithi ababebuthene lapho kokufaka nehele ekhethekile yakhelwe kokukhipha iyunithi kusukela izikhatha zomoya oshisayo kanye supply abandayo.
Njengoba ubona, ifenisha ngaphansi esiqandisini esakhelwe, kanye ngaphansi nezinye amasu afanayo kungcono hhayi ukuthenga esitolo, nokuhleleka workshop, ukuze anqume kusengaphambili ne amamodeli we amayunithi nemishini.
Izindlela umnyango obandayo
Shumeka esiqandisini ilungile - lokhu, phakathi kwezinye izinto, kusho futhi uvikelekile ku-ke iminyango olungaphambili lwesonto headset. Nenkanuko edlulele zingenziwa:
Esebenzisa kokuhlanganisayo ekhethekile. Kulokhu, umnyango esiqandisini futhi olungaphambili lwesonto kuthiwa abethela uvalwe futhi esiphezulu bakha isakhiwo esisodwa Monolithic. Bobabili iminyango angavulwa ngesikhathi esifanayo kabanzi - kuze kufinyelele 115 degrees.
Abantu ababegijima ngokusebenzisa. Umnyango imbala kule ukwakhiwa ehamba phezu umhlahlandlela ovundlile. Ububi isixazululo sinjalo nobunzima ekunakekeleni lezingubo. Phakathi nomhlangano umnyango futhi yasibamba olungaphambili lwesonto e sezimoto ezinjalo eziningi udoti. Vula esiqandisini ogibele le ndlela can 90 degrees kuphela.
Izici wokusebenza: umnyango kokuhlanganisayo
Sebenzisa esiqandisini esakhelwe ngeke kube nzima kunokujwayelekile. Nokho, eminye imininingwane Usekhona. Zithinta ikakhulu umnyango iyunithi. Lokhu imininingwane eminingi esiqandisini esakhelwe ubhekwa iphuzu ababuthakathaka. Umthwalo phezu kokuhlanganisayo yalezi onobuhle kuyindaba ebalulekile, ngakho ezigugile beza kanengi ukudlula amayunithi ezivamile. Yiqiniso, umnyango imodeli esakhelwe musa overload noma ukudalula yayo ebanzi kunokuvamile. Uma wephula esiqandisini iluphu eyeka ukuvala uvalwe. Ngenxa yalokho, injini iqala ukuba isebenze ngaphandle kokuphazamiseka futhi ngokushesha iphuka. Ngakho-ke, inkinga enjalo, uma kwenzeka, susa ngokushesha. Buxhomeke ngoba esiqandisini esakhelwe zingathengwa esitolo okukhethekile noma umyalelo inthanethi. Izindleko, kuye ngokuthi imodeli iyunithi, kungaba kusuka 1500 kuya ku-ruble 4000.
Ngu design buxhomeke ngoba amafriji esakhelwe zifane ifenisha. Nokho, Zase zilinganisela zonke Uchwepheshe engcono futhi ozethembayo. Ngaphezu kwalokho, kule ndaba abanikazi akudingeki ukuchitha isikhathi ukusesha efanelekayo okungukuthi kuya ethize umhlangano ungakuphi. Uma ushayele master uzodinga kuphela ukunikeza ulwazi mayelana nomphathi brand imbala, futhi loop izonikelwa ekhaya lakho. Kufanele sisebenze abasuse ngokuvamile ruble mayelana 2000.
Abantu abakhetha ukuthenga imishini enjalo ngoba ikhishi lakho, ngokuvamile nesithakazelo yini esiqandisini engcono esakhelwe iyatholakala ku yesimanje yasekhaya ekhaya Imishini emakethe okwamanje. Brands zinokwethenjelwa, eside ehlala njalo futhi kulula ukuyisebenzisa, lapho empeleni abasakwazi eziningi. Ngezansi, sicabangela ethandwa kakhulu.
Ukwahlulela ngokubukeka ukubuyekezwa yabathengi, izinzuzo main of amayunithi yalesi brand kubhekwe obunamandla ngesayizi compact, ukusebenza ububanzi futhi emashalofini elula. Ukuthenga esiqandisini esakhelwe ukuba Zanussi, uzothola inqubo ithembekile, ngokuqinisekile uzosebenza kahle iminyaka eminingi. Omunye izici wonke amamodeli we lokhu brand liyajabulisa esakhelwe ngaphakathi. Isebenza cishe buthule, futhi izinzuzo kusukela kuphawuleka. amashwa elivamile laso sonke amafriji kuyinto emoyeni yokujama tsi kanye ekuqongeleleni akuyona nephunga elimnandi kakhulu. Amayunithi ukuze Zanussi sha, ngakho lokhu ukuntula sintula. Futhi, amamodeli eziningi it has a umsebenzi ewusizo Frost Mahhala, indlela elula kakhulu ukubheka for zikagesi.
I yokuntula yalesi brand abathengi ngokuyinhloko ukhathazeke hhayi obukhulu kakhulu zangaphansi yepulasitiki nentfo ukulawula ambalwa lokushisa ongahluziwe.
Ukukhathazeka, amafriji esikhiqiza yalesi brand yasungulwa ngo-1949. Ngo nokukhiqizwa kwezinto ngobuningi, base umkhankaso ngo-1955 Okwamanje, izitshalo lenkampani zitholakala emazweni amaningi-EU. Izinzuzo esemqoka sha Liebherr amayunithi kungenziwa ngokuthi isibonisi nge elula enembile imenyu umsebenzi Ayikho Frost ongaphakeme power ukusetshenziswa ekilasini. Okwamanje, le nkampani ikhiqiza ezingaphezu kuka-200 onobuhle amafriji. Ikakhulukazi ethandwa sha Liebherr ishumekeka esiqandisini - ethembeke kakhulu futhi evulekile.
Phakathi ukushiyeka loluphawu amayunithi bungabonakala ukuthi babe ngenxa ukugqwala e ipayipi aluminium ngezinye izikhathi avele ukuvuza.
Plus amayunithi loluphawu ubhekwa mayibe ngaphezu kwawo wonke nekhwalithi yekusebenta (plastic enamandla kakhulu ngaphakathi). Ngenxa a control omuhle lokushisa imikhiqizo esiqandisini kusukela kule nomkhiqizi ungahlala fresh isikhathi eside. Ngokwesibonelo, imifino kanye apula agcinwe isikhathi esingaphezu kwenyanga. Kobuthakathaka esiqandisini Neff eyakhelwe cishe akunandaba. yokuntula zayo Abagibeli bahlanganisa amakhosikazi kuphela amazinga kancane aphakeme umsindo nekhamera hhayi eningi kakhulu.
On ukudayiswa okwamanje, kukhona nezinye brand ethembeke kakhulu futhi hhayi eqolo amafriji esakhelwe ngaphakathi. Njengoba isibonelo, Hotpoint-Ariston, "Atlas", "Indesit" futhi t. D. ethandwa Ikakhulukazi phakathi emizi isebenzisa qualitative German esiqandisini lalihlehliswa Bosch. Izinzuzo esemqoka kule brand amayunithi zihlanganisa nokwethembeka wokuqala nomkhulu kunabo bonke futhi ukusebenza ethule. Phakathi kwezinye izinto, "Bosch" onobuhle labo abazokwazi isikhathi eside kakhulu ukugcina abandayo ngemva uhambo.
Small amafriji esakhelwe
Emakhishini ezincane, njengoba umthetho, asethwe hhayi kakhulu umaka ekhishini amasethi. abakhiqizi Modern ukunikeza abathengi ithuba elihle kakhulu retrofit amafriji esakhelwe futhi zakhiwo. onobuhle Small kungaba izinga aphansi kanye nama-practical kuka ezinkulu. Ngokwesibonelo, abanikazi encane ekhishini kufanele ucabange mayelana nokukhetha imodeli Liebherr UIK 1424. Lokhu kwakha isiqandisi ezincane kungenziwa kalula ibekwe kunoma yiziphi iKhabhinethi ngaphansi echibini.
Enye samuntu emangalisayo lemasu ingashiwo Hotpoint-Ariston BTSZ1632. Ngaphezu nokwethenjelwa, lokhu imodeli has a eziphansi kakhulu. Izindleko holodilnichek enjalo kabili eshibhile Liebherr.